KA DIB MAALMO INTEE KA BADAN OO DABOCOTU KA KACDO KA DIB BEERISTA IYO BEERITAANKA DHUL FURAN, HEERKULKA AY U MUUQATO, IYO SIDOO KALE TALOOYIN KU SAABSAN SIDA LOO DEDEJIYO GEEDI SOCODKA, CALEEMAHA SAWIRRADA - BEER CAGAARAN
Waxaan u koraynaa radishes - meeqa maalmood bay ku dhalataa ka dib beerashada iyo sida loo dedejiyo geeddi-socodka?
Radish ma aha oo kaliya "qof xun", laakiin khudradda cagaaran ee waxtar leh oo ay ku jiraan ascorbic acid, fitamiinada kooxda B, P, PP, borotiinada, amino acids, sonkorta, cusbada calcium, birta, fosfooraska, iyo wixii la mid ah.
Sidaa darteed, dabocase waa mid aad u caan ah ee bannaanka u reer Ruushka. Radishes waxaa lagu beeray sida ugu dhakhsaha badan ciidda ku dillaacday ka dib markii barafka ugu horeeya dhalaalay oo kulaalaa ilaa 10-12 ° C.
Gobollada koonfureed iyo kuwa galbeed waxay xilligaan bilaabmaysaa bilawga April. Maanta waxaan kuu sheegi doonaa inta maalmood ee dabocase Gagaarka iyo sida ay u dhacdo.
Maxaa saamayn ku leh goosashada wanaagsan?
Waxaa jira arrimo badan, inta badan waxay ka soo horjeedaan tayada iyo abuurista. Qodobka ugu muhiimsan ee bannaanka u khibrad leh - ha kaydi abuurka beeritaanka muddo ka badan hal sano. Sidoo kale fiiro gaar ah u leh:
Cabbirka abuurka - Dooro balaar, yar yar iyo grayish (waxay u badan tahay in ay "jiran yihiin").
Ground - waa inay noqotaa qoyan, laakiin maaha daadad. Sidoo kale, midhaha wuxuu jecel yahay ciidda iftiinka iyo dabacsan.
Cimilada guriga, aqalka dhirta lagu koriyo ama wadada - Radish wuxuu jecel yahay kuleylka (laakiin ma aha kuleyl) oo u koraa si dhakhso ah, inkasta oo ay awood u leedahay inay u adkeyso heerkulka hooseeya.
Kala sooc - "Sabtida", "18 maalmood", "casaan hore", "ruby" iyo "corundum" ayaa si dhaqso ah u kaca.
Waxaanu kuugu soo bandhigi doonaa inaad daawato fiidiyo ku saabsan waxa keena saameyn ku yeelashada goosashada:
Ka dib intee maalmo intee ah ayay geedo u muuqdaan dhulka furan ka dib marka laga bilaabo beeridda?
Marka heerkulku daboolo dabocase mid ka wanaagsan? Si dabocase, qiyaasta 75-80% iyo qiyaastii 20 ° C waa habboon. Xaaladahan oo kale, wuxuu ka dhigaa jidka 100-120 saacadood iyada oo aanad engegin. Maalinta maalinta miraha dabeylaha ka soo baxaya waxay ku soo baxayaan furan furan marka la qooyay?
Haddii miraha horay loo qooyay, ka dibna waxay noqon doontaa mid ku filan Gagaashida muddo saddex maalmood ah.
Waa arrin ka duwan haddii dhirta ay tahay inay sameyso habka cimiladu u xun tahay. Muddo intee le'eg ayuu daboolku u muuqdaa ka dib markaad beertaan? At 10 ° C, waxaa lagama maarmaan ah in la sugo geedo ugu yaraan 10 maalmood, kala badh heerkulka, muddada waxaa lagu kordhiyey ilaa 15-20 maalmood. Miraha iftiinka ayaa joojin kara koritaanka daboolka ka hor inta aan la gaadhin kuleylka, beergooyska kiiskan wuxuu noqon doonaa mid soo daahay.
Haddii ninkii beerta ka shaqaynayay ka soo horjeesatay kicinta iyo kicinta kicinta, ka dibna waxaa lagama maarmaan ah in lagu abuuro abuurka si qoto dheer ah oo ku saabsan hal mitir ah, haddii kale abuurka ayaa aad u adag inuu jabo.
Waxaad arki doontaa sawir geedo dabocase iyo sida ay u dhacdo:
Sidee si dhakhso leh u koraan dabocase?
Waxaa jira dhowr qarsoodi ah oo ay ku raaxeysanayaan bannaanka u khibrad badan:
Soak. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad sii haysato miraha ku duudduuban maro qoyan iyo diirran ilaa 24 saacadood, ka dibna ku diirin rubuc saacad ah biyo kulul.
Bubbling. Waxay u egtahay qoyaan, laakiin waqti isku mid ah kombuunis ayaa la dhigayaa taangiga, kaas oo biyo qabta si markaa miraha u dhaqdhaqaaqa si siman oo loo kobciyo oksijiinka. Si loo hirgeliyo radishes sidan waxay qaadataa 8-12 saacadood.
Kicinta kobaca. Waxay ku kobcinayaan abuurka leh faa'idooyin faa'iido leh.
Film. Waxay ku dabooshaa dalagyada habeenkii.
Maxaa la sameeyaa ka dib markii miro lagu dhawaaqay?
Marka qoryaha ugu horeeya ay jidka u maraan qorraxda, wakhtigu wuxuu yimaadaa dhuuban sariiraha dabocase. Geedo khafiif ah waa in laga saaraa, oo siiya nolosha kaliya ee ugu xooggan iyaga. Masaafada u dhexaysa caleemaha waa saddex ilaa afar sentimitir. Tani waxay dhalinaysaa ugu badnaan.
Dhirta yaryar waxay u baahan yihiin in maalin kasta la waraabiyo., si joogto ah weed iyo dabacsan ciidda, burburin haramaha.
Sidee loo fahmaa waxa daboolka ka soo baxa?
Caleemaha Young waa caleemo simmin ah, oo ugu dambeyntii u soo jeestay dushooda. Marka la barbardhigo koritaankeeda, xididdadu waxay ka muuqdaan dhulka, kuwaas oo qayb ahaan muuqda.
Haddii aan waxba laga gaarin?
Sidii hore loo soo sheegey, barafka ayaa ka hortagi kara dabocase. Xaaladdan oo kale, aqalka dhirta lagu koriyo / foornada (doorashada saxda ah) ama kaydka sabir iyo rabitaan ah in lumiyo dalagga (doorashada khalad ah) waa mid faa'iido leh.
Labaad khudradda xididka cadawga - iskutallaabta. Bannaanka beeraha waxaa laga yaabaa inaanay ogaan caleemaha caleenta ah sida cayayaanka ay cuni doonaan. Si loola dagaallamo, isticmaal kiimikooyinka, geedo saafi ah iyo milix-karis ah tamaandho ama baradho.
Miyuu suurtagal yahay in laga baxo abuurka shinni wanaagsan ka hor?
Bannaanka u diyaariyaan xal guri:
Sideed garaam oo cusbo ah ayaa lagu daraa galaas biyo, miro ayaa lagu shubay oo isku dhafan.
Ka dib shan ilaa todoba daqiiqo, waxaad u baahan tahay inaad soo saarto wax kasta oo soo kordhay.
Fiiro u yeelo inta hartay "kareem", oo laga helo midho wanaagsan.
Waa in si taxaddar leh loo qalajiyo, maaha inay kala firdhaan dalagyada mustaqbalka qolka.
Si arrintan loo sameeyo, waxaad isticmaali kartaa taageere, laakiin ma aha timo jareer.
Radish - mid ka mid ah miraha ugu horeeya; xagaaga waxaad heli kartaa ugu yaraan saddex dalag, xitaa waqooyiga waddanka. Waa wax walba oo muhiim ah in laga ilaaliyo daqiiqadihii ugu horreeyay ka dib markii la beero si ay u dillaacaan dabocase miisaska habeenkii xagaaga.